Alaab-qeybiyeyaasha PDT iyo Warshad | Shiinaha Soosaarayaasha PDT
maaskaro loo hoggaamiyo qoorta oo loogu talagalay daryeelka maqaarka
Kani waa nooc 7 ah oo hogaaminaya daaweynta iftiinka wajiga ee loogu talagalay daryeelka maqaarka, isticmaalka guriga maalin kasta, waxay kordhin kartaa dheef-shiid kiimikaadka, waxayna sare u qaadi kartaa isdhexgalka kiimikada iftiinka, waxay kordhin kartaa regerntion of colleagen, si maqaarka loo caddeeyo, maqaarka loo adkeeyo, maqaarka oo loo xasiliyo iwm.
Jet fuqa mashiinka PDT
Mashiinka diirka Jet waa mashiinka shaqooyin badan, tikniyoolajiyad diirka jet iyo dheemanka dermabrasion, badanaa waxaa loogu talagalay nadiifinta maqaarka, iyo kombaresarada hawada cadaadiska sareyso iyo soosaarka ozone ee loogu talagalay qoyaanka maqaarka iyo maqaarka. wax muhiim ah, waxay leedahay nidaamka PDT, iftiinka kaladuwan ayaa sare u qaadi kara maqaarka si uu dhaqso ugu gaaro kaamil ahaanta.
Nalalka hoggaami kara laydhka mashiinka PDT
Nalalka laydhka la laabi karo ee Mashiinka PDT waa qaab ku habboon, way fududahay in la qaado markii aad u baahato, oo meel dhig, Waa mashiinka PDT oo shaqeynaya, 7pcs led light, light cas waa maqaarka la caddeeyo; iftiinka cagaaran si loo dajiyo maqaarka; iftiin jaalle ah si looga saaro qiiqa; iftiin guduud ah si looga saaro finanka, iftiinka Cyan si loo dheelitiro dheecaanka.
wajiga uumiga ayaa hogaaminaya mashiinka pdt
Kani waa mashiin daaweyn foton ah oo tusaale ah, oo badanaa loo yaqaan PDT machine, wuxuu leeyahay toddobo ilays oo kala duwan, nal walbana wuxuu leeyahay shaqo kala duwan, inta badan soo dejin, wuxuu leeyahay wax buufin ah, taas oo macnaheedu yahay inay uumi karto wejiga inta la daaweynayo.
keentay mashiinka daaweynta
Kani waa mashiinka pdt therapy therapy light, oo loo adeegsan karo saloon ama guriga, waa midab kaladuwan oo loogu talagalay shaqooyin kala duwan, sida ku haboonaanta maqaarka oo cadeeya, maqaarka finanka, deganaanshaha maqaarka, anti bararka, xoqitaanka maqaarka, maqaarka oo cusbooneysiiya.